सहवासको बेला यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस् ! — Paschimnews.com News From Nepal
आज : २०७७ साउन २८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
सहवासको बेला यी ५ कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७७/१/२६ गते
आफ्नो पार्टनरसँगको सहवासको समय सबैभन्दा अन्तरंग तथा महत्वपूर्ण समय हो । सहवासलाई अझै आनन्ददायी बनाउन तथा उच्च यौन आनन्द प्राप्त गर्नका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहवासका बारेमा गर्नै नहुने गल्ती तथा त्यस्ता गल्ती हुन नदिनका लागि ध्यान दिनुपर्ने ५ कुरा यस्ता छन् :
२) लभ बाइट्सः धेरै मानिहरुले आफ्नो पार्टनर सहवासमा एग्रेसिभ होस् भन्ने चाहन्छन् र एग्रेसिभ पार्टनर मन पराउँछन् । तर सहवासका लागि आफ्नो महिला पार्टनर तयार नहुँदै वा उत्तेजनामा नआउँदै उनको जिउमा टोक्नु राम्रो मानिँदैन ।
यसले जिउमा आनन्दको साटो पीडा हुन्छ र असहजता पैदा भई पार्टनर तर्सिने जोखिम पनि हुन्छ । त्यसैले पार्टनरलाई कान, काँध, घाँटी तथा सरीरका अन्य भागमा लभ बाइट दिनुअघि तपाइँको पार्टनर पूर्ण रुपमा उत्तेजित भएको निश्चित गर्नुस् ।
३) पार्टनरको सरीरमा ध्यानः यसमा दुइमत छैन की सबैभन्दा बढि यौन उत्तेजना प्राप्त हुने अंग यौनांग नै हो । तर सहवासका बेला सिधै यौनांगमा केन्द्रित हुनु राम्रो हुँदैन ।
त्यसअघि जिउका अन्य भागहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ । पार्टनरको घुँडा, कम्मर, ढाड, पेट, नितम्ब, वक्षस्थल लगायतमा मुसार्ने तथा सुम्सुम्याउने र चुम्बन गर्ने जस्ता क्रियाकलापले तपाइँको पार्टनरलाई उत्तेजना प्राप्त गर्न सहयोग पूराउँदछ । यसले यौन आनन्दमा पनि वृद्धि गर्दछ ।
४) जिउको भारः तपाइँ महिला हो वा पुरुष । केही समय आफ्नो पार्टनरको जिउमाथि आफुलाई पूर्ण रुपमा फ्याँकेर क्रेजी बन्न सक्नुहुन्छ । तर जब तपाइँ पार्टनरको जिउमाथि सुतिरहनु भएको छ ।
भने यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् की तपाइँले आफ्नो जिउको पूरै भार पार्टनरको जिउमा नपार्नुस् । यसो गर्दा स्वास फेर्न कठिन हुन्छ । पूर्ण रुपमा अक्सिजन लिन नपाउँदा त्यसले मस्तिष्कसम्मै प्रभाव पार्दछ र यौन क्षमता तथा आनन्दमा नकारात्मक असर पार्दछ ।
५) समयमै स्खलनः यो विशेषगरी पुरषको हकमा लागू हुन्छ । उपयुक्त समयमा विर्यस्खलन गर्नका लागि तपाइँले आफ्नो मांशपेशीमा पर्याप्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
धेरै छिटो विर्यस्खलन हुँदा तपाइँको पार्टनरले यौन आनन्द नै प्राप्त गर्दैन भने धेरै ढिलो विर्यस्खलन हुँदा तपाइँको पार्टनरले यौन आनन्द होइन जिमखानामा फलामको भार उठाइरहेको अनुभुति गर्दछ । असामयिक स्खलन रोकेर पर्याप्त चरमआनन्द प्राप्त गर्नका लागि पाकक्रिडामा पर्याप्त समय खर्चिनुस् ।
तपाइँले लामो समयसम्म सहवास गरेर पनि स्खलन गर्नको लागि हस्तमैथुन नै गर्नुपर्छ भने पनि पहिले आफ्नो पार्टनरलाई सन्तुष्टी दिलाउने काम गर्नुहोस् र अनिमात्र आफ्नो इच्छामुताविकको स्खलन तर्फ लाग्नुहोस् ।
किन आफूभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग घरजाम ?
गर्भावस्थामा ख्याल राख्नैपर्ने केही कुराहरू